Sunday January 19, 2020 - 19:30:38 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay kasoo qeyb galeen mas'uuliyiin, salaadiin, aqoonyahanno iyo qeybaha kala duwan ee bulshada, kana dhacday gobolka Bay ayaa waxay beesha Eelaay ku dooratay Suldaan guud oo ay ku mideysan yihiin.
Munaasabaddan oo ay qabanqaabadeedu socotay mudd sannad ah ayaa ka dhacday degaanka Bisiq-cadde oo hoos taga degmada Buurhakaba.
Beesha ayaa dooratay in hogaankooda guud ee dhaqanka uu noqdo Suldaan Cabdulqaadir Sheekh Cabdicasiis Sh/Cabduullaahi, kaasoo sida magaciisa laga dheehan karayo ah, dhal culimo.
Nabadoonada beesha iyo dhammaan dadkii marti sharafta ahaa ayaa ugu hambalyeeyay Suldaanka mas’uuliyadda loo dhiibay, iyagoo Alleeh uga baryay inuu ku garab siiyo.
Suldaan C/qaadir ayaa Gudoomiyaha Odayaasha Dhaqanka Wilaayaadka Islaamiga ah, Sh/ Ibraahim Shaacir ka gudoomay Kitaabka Qur’aanka Kariimka ah, Qori cusub AK47 iyo Booshkiisa iyo gaari cusub.
Mas’uuliyiintii kasoo qeyb gashay munaasabadda oo ay kamid yihiin Wullaada Bay iyo Bakool iyo Sh/hoose, oo kala ah Sh/Cllhi Mucallim Geedow iyo Sh/Muxamad Abu Usaama ayaa ku dhiira galiyay waaliga inuu u cadaalad sameeyo beesha dhexdeeda, kuna hago ku dhaqanka shareecada islaamka, waxayna u ballan qaadeen iney garab ku siinayaan.
Suldaanka ayaa dhankiisa ballan qaaday inuu kasoo baxayo mas’uuliyadda ay beeshiisa u dhiibatay, kuna dadaali doono daris wanaagga iyo xiriirka qabaa’illada kale ee ay beeshi ood wadaagga kula tahay dhammaan gobolada ay degto.
Dhaqaale badan ayaa ku baxay xafladdan waxaana muddadii ay socotay la gowracay Geel badan, iyadoo martida lis iyo loog, lala garab taagnaa.